UPDATE: Wararkii ugu dambeeyay Caawa dagaalkii ka dhacay Ceelasha Biyaha + Khasaare | HalQaran.com
Home Wararka Maanta UPDATE: Wararkii ugu dambeeyay Caawa dagaalkii ka dhacay Ceelasha Biyaha + Khasaare
UPDATE: Wararkii ugu dambeeyay Caawa dagaalkii ka dhacay Ceelasha Biyaha + Khasaare
Muqdisho (Halqaran.com) – Waxaa Faah faahin ayaa kasoo baxeysa dagaal Ciidamada Booliska iyo maleeshiyaad ku dhexmaray deegaanka Ceelasha biyaha ee duleedka Muqdisho.
Dagaalka ayaa ka dambeeyay kadib markii Ciidamada Booliska ay weerar ku qaadeen Ciidan maleeshiyaad ah oo ku sugnaa xarunta deegaanka Ceelasha biyaha halkaasi oo Guddoomiyaha uu soo kaxeystay Ciidankaasi.
Hal ruux oo ka mid ahaay Maleeshiyaadkii hubaysnaa ayaa ku dhintay weerarkaasi, waxaa kale oo ku dhaawacmay laba kale Ciidamada Booliska ayaa gacanta ku soo dhigay hal ruux oo ka mid ahaay maleeshiyaadkii dagaallamay.
Guddoomiyaha deegaanka Ceelasha biyaha oo watay Ciidanka maleeshiyaadka ayaan agtiisa meesha kala cararay, kadib markii uu ka cabdsooday in ciidamada ay gacanta ku soo dhigaan.
Xarunta deegaanka Ceelasha biyaha oo ah goobta weerarka ka dhacay ayaa waxaa la wareegay ciidamadii Booliska oo halkaasi gacanta ku haya.
Si kastaba, maleeshiyaadkii kale ayaa ka cararay goobta, waxaana Booliska ay wadaan baaritaan ku aadan halka ay aadeen Maleeshiyaadkaasi.
dagaal Booliska iyo Al Shabaab